UMnu Meshandren Naidoo.
Izwe Liqophe Umlando Ngegunya Lezobuchwepheshe
INingizimu Afrika iqophe umlando ngokuba yizwe lokuqala ukukhipha igunya le-Artificial Intelligence (i-AI) enhlanganweni okuthiwa yi-DABUS okuthiwe ingumsunguli. Ukunikwa igunya kwe-DABUS kuNtulikazi nonyaka kumangaze abaningi futhi kwagxekwa, nokho kukhombise umhlaba ukuthi iNingizimu Afrika isisukile emqondweni wokuthi ngabantu kuphela abakwazi ukusungula izinto!
Lokhu kushiwo nguMnu Meshandren Naidoo (26), owenza izifundo zobudokotela noyilungu le-African Health Law and Research Ethics Flagship e-UKZN nobeseqhulwini lwenkulumompikiswano ngalendaba okuyinto ayicubungulayo ocwaningweni lwakhe lweziqu zobudokotela. Ukuphawula kwakhe ngalolu daba kuholele ekutheni abe ngoyedwa kwababili baseNingizimu Afrika okubhalwe ngabo ezikweni lezindaba lobuchwepheshe elivelele eMelika i-Patently-O. Useke wamenywa ukuthi azobambisana nabanye abaholi baphesheya kwezomthetho othinta amagunya nezemfundo, okukhona kubona uSolwazi Ryan Abbott, ohamba phambili emhlabeni emalungelweni amagunya okusungula. Umsebenzi ka-Naidoo usuke wacwaninga ngoDkt u-Stephen Thaler uqobu, umsunguli we-DABUS.
‘IMelika neYurophu bahumusha umthetho wamagunya njengovumela abantu kuphela ukuba babe ngabasunguli, kanti ukuba ngumsunguli kudinga umuntu obonwa wumthetho, okuyinto engekho kwi-AI,’ kusho u-Naidoo. ‘Nakuba iNingizimu Afrika ingazishongo izizathu ezenza ukuthi yehluke endleleni okwenziwa ngayo kwamanye amazwe, kodwa lendlela yesekwa yinqubo kahulumeni waseNingizimu Afrika. Lesi simo senqubo sikhombisa ukwanda kokuqamba izinto ezintsha nokusebenzisa i-cloud computing ne-AI ukwenza lokho.
‘Ngokuvumela ukuba i-AI iqambe izinto, cishe iNingizimu Afrika iqeda kuvezela umhlaba ukuthi isikulungele ukuthatha izinqumo ezizwana nesimo senhlalo nesomnotho kwethu, ngisho kungathiwa azivumelani nezamazwe amakhulu, okuyinto engenza ukuthi ukutshala imali eNingizimu Afrika nakwi-AI kube yinto enhle. Okumnandi ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokugunyaza kweNingizimu Afrika i-Australian Federal Court inqume ukuthi i-AI ingaba ngumqambi ezintweni zomthetho wamagunya,’ kusho yena.
U-Naidoo, ongumbuyekezi wabacwaningi abangozakwabo ezintweni ezithinta ubunikazi bengqondo emaphepheni ocwaningo uma eceliwe, useke wethula izinkulumo ezinohlonze eNingizimu Afrika, wakhombisa nangomsebenzi wakhe ezingqungqutheleni zaphesheya. Kumanje ubhala amaphepha ocwaningo amaningi emabhukwini ocwaningo alapha ekhaya nawaphesheya, elinye eselemukelwe kwi- South African Law Journal (i-SALJ).
Uzokhuluma kuMandulo mhla ziyi-8 e-UKZN emcimbini we-AI kwezempilo. Lomcimbi umahhala uma ubhalisa lapha.
Ukuhambisana nokukhuthaza inkulumo ngomthetho, u-Naidoo ushicilele amaphepha ocwaningo ezinkundleni ezivulekile njenge-The Conversation ne-MoneyWeb, i-World Economic Forum, i-Mail & Guardian kanti uke wakhuluma emsakazweni i-SAFM.
U-Naidoo ubonge i-UKZN, i-National Research Foundation, uSolwazi Donrich Thaldar, uMnu Bongi Shozi, uMnu Seenie noNkk Peggy Naidoo (abazali bakhe) noNks Amy Gooden ngokumxhasa bangaphezi nangokumeseka.
• U-Mnu Meshandren Naidoo wenza iziqu zobudokotela futhi uyilungu le-African Health Research, Law and Ethics Flagship e-UKZN, eligxile kwi-AI nezomthetho wezinto zengqondo.
Udokotela WaseKZN Wenza Ezibukwayo Ekulweni Nofuba
Umfundi Wase-UKZN Wenza Ezibukwayo Emkhakheni Wezobuchwepheshe Namabhizinisi
Umfundisi Wethule Ucwaningo Ngokuthola Ubulungiswa Kwabagwetshiwe Basemakhaya
Ukwakha Uhulumeni Ohlinzeka Ngezidingo Kangcono